lundi, 12 octobre 2020 11:13
Photos net illustration
Décentralisation : Les conseillers souvent snobés
Les conseillers sont souvent ignorés, voire snobés dans le cadre de la décentralisation à Madagascar. La création de l’Associations des jeunes maires Analamanga (AJMA) et de l’entité similaire pour Toliara à la veille des sénatoriales en est une preuve évidente. Les initiateurs de cette entreprise auraient peut-être pensé que les maires sont les seuls détenteurs du pouvoir au niveau communal. Les conseillers sont pourtant les véritables administrateurs des communes, des régions et des provinces, qui constituent les collectivités territoriales décentralisées (CTD) de la République de Madagascar aux termes de l’article 3 de la Constitution. Le paragraphe premier de l’article 143 de la loi fondamentale le reconfirme en stipulant que les CTD de la République sont les communes, les régions et les provinces.
Courant alternatif 220V no resaka eto. Fampatsahivana: Ny courant alternatif dia misy pôle na fil roa, ny iray Neutre (na - raha courant continu toy ireny anaty fiara na batterie 12V ireny), ary ny pôle na fil iray "Phase" (na +). Maka testeur tourne-vis ireny, dia izay mirehitra ny lampe no Phase. Misy fitaovana hafa ihany koa azo hijerena azy raha manana multimètre. Ny Phase sy ny Terre tokony anome 220V ihany koa raha tsara ny prise Terre. Ny Neutre sy ny Terre tokony tsy misy tension. Ny asan'ny interrupteur izany dia mpanapaka na mpandeha ny Phase, fa ny Neutre avy dia mandeha mivantana any amin'ny ampoule. Tsy tokony hisy Neutre mandehandeha mihitsy izany ao anaty interrupteur. Raha misy ampoule maromaro tiana hiaraka hirehitra na maty, dia atao en parallèle aloha ireo ampoule maromaro ireo, izany hoe ampifandraisina ny samy Phase, ary ampifandraisina ny samy Neutre, dia ny Neutre avy dia ampifandraisina mivantana amin'ny Neutre principal, ary ny Phase kosa tapahan'ny interrupteur alohan'ny ampifandraisana azy amin'ny Phase n'ilay ampoule voalohany.
lundi, 05 octobre 2020 09:35
Covid-19: Inona no mbola atahorana azy?
Crédible kokoa ilay message raha nampanaovina arovava orona ireto mpanatrika marobe tsy manaja elanelana 1m ireto nandritra ilay fandaharana niainga avy any Tolagnaro. Ianao manome toro-marika hoe tsy maintsy manao aro vava orina, nefa ireto olona asehonao miaraka aminao tsy misy manao na iray aza. Ianao nilaza fa fanefitra ny CVO+, mametram-panontaniana ny rehetra hoe, efa misy izany ny fanafody sy fanefitra, ka inona no mbola atahorana io aretina io, ka nahoana no tsy vahana ny hamehana ara-pahasalamana. Mirary soa e.Patrick
Sary nindramina Mvola
Anisan'ny ventin-teniko mandrakariva ny firosoana amin'ny payement électronique toy ny banking money, carte électronique. Mahafaly ny firosoan'ny Mvola amin'ny fanomezana tolotra Carte Visa international, izay ahafahana maka vola na aiza na aiza maneran-tany amin'ny alalan'ny distributeur automatique Visa. Tsara ihany koa ny fahafahana mampiasa ilay carte Mvola amin'ny fividianana entana amin'ireo mpivarotra manana terminal Visa TPE, sady mampihena ny tsy fandriam-pahalemana ireny satria lavitry ny fikirakirana vola be an-tanana. Tsara ihany koa ny carte Mvola satria afaka hividianana entana na service amin'ireo mpivarotra eny amin'ny internet na vente en ligne.
Sary fanehoana Vitatsika sy nindramina
Matetika mila asiana fefy manodidina tamboho ny tany misy ny tena. Ny tamboho no anisan'ny sarotra, nefa heverina ataotao amin'izao izy io.Ny Tamboho dia trano lehibe tsy misy tafo. Kajiana ny halavan'ny tamboho:Matetika ny tany tsy efamira na mahitsizoro dia refeso ny halavany ambony avaratra + halavan'ny ilany andrefana + ilany atsimo + ilany atsinanana. 1- Fototra Toy ny manao trano, jerena ny tany anorenana azy. Raha faritra be orana na mando lava izany dia mila jerena manokana izay.Raha faritra be fasika na onaona, dia loharana teo ny fasika, ary soloina tany mafy voatoto, raha amoron-dranomasina dia asiana pieux hazo ao ambany, atsatoka faran'izay lalina ny bois rond mandram-pahitana tany mafy tsy laitra intsony, dia iny pieux iny, isaky ny 50cm no milevina anaty fondation.
vendredi, 02 octobre 2020 09:18
Misy zavatra manamarika anao entinao mamakivaky ny fiainana
Mbola nanao collecteur letchi tamin'izany Miditra anaty ala saro-dalana ny fiara.Maty tsy niaka-menaka ny camion nentiko.Tsy misy olona hamonjy anao fa dia miroboka anaty fotaka ambany camion, miaraka amin'ny mpanampy anao. Nisy rangaha iray efa mamo be nanantona.Tsy niteny mihitsy izy fa nijery nanara-maso, teo amin'ny cabine misokatra misy ny motera, zaho ao ambany, mahita azy.Niarahaba azy aho, fa tsy namaly izy nijery fotsiny.Afaka adiny iray teo angamba vao niteny izy: - "Serrer-o tsara ny boulon, hoy izy, ary aza andrasana rahampitso izay azonao serrer-na androany", dia lasa izy. Mandram-pivoakako tao ambany camion, efa tsy hitako izy. Mirary soa e.Patrick
Tsy fanaoko ny mitondra kiana ampahabemaso ho antsika miaramila ao anaty Foloalindahy, mahatsiaro ho rahalahy afaka manoro hevitra na izany aza satria iombonana ny fototra niaviana sy hijoroana. Maro ireo ezaka ataonareo Zandry sy Zoky ankehitriny eo anivon'ny Tafika, Miaramila, Zandary ary Polisy. Anisan'ny ezaka goavana ary misy fandrosoana ny fametrahana ho matihanina ny asa fiarovana eo anivon'ny Foloalindahy, ary miroso amin'ny fanavaozana sy fametrahana ireo rafitra mifandraika amin'ny tanjona tiana ho tratra. Ny tiako iahaviana dia ny fanamafisana ny fitondran-tena, ny fitsipi-pifehezana ara-miaramila, ny tsy fiarovana izay mania nefa efa nahitsy tamin'ny lalana ratsy nataony. Ohatra amin'izany, efa tonga ny Lehibe, ny Praiminisitra raha eto amin'ny sary, misafo ny andian-tafika, ny Faneva efa mihatrana, nefa mbola misamaritaka ireo manam-boninahitra aoriana, mbola misy ny mampiasa phone sy manondro izay fandaminana.
Iarahan'ny rehetra manaiky fa tsy maintsy ny fototra no atao tsara raha te hanana trano mafy sy maharitra. Ny fampandrosoana ny Malagasy sy Madagasikara dia tsy maintsy miainga amin'ny fampandrosoana ny Fokontany. Ajanona ity fizarazana isam-poko nolovaina tamin'ny fanjanahan-tany ity, ary hajaina sy omena lanja ny fomba amam-panaon'ny isaky ny faritra. Mila olona mahay izany ny mitantana ny Fokontany. Manana licencié, dokotera, injeniera, mihoatra ny 500 000 isika raha ny nivoaka ny oniversité tao anatin'ny 10taona fotsiny no jerena. Nanao engagement décenal ny ankamaroan'ireo izay nandray bourse, izany hoe nanaiky ny ampiasan'ny fanjakana azy na aiza na aiza mandritra ny 10 taona.
Betsaka ny resaka na lalàna efa natao amin'ny fitsinjaram-pahefana tena izy, fa dia samy namikitra nitazona ny fahefana ho an'ny vondrona antokon'olom-bitsy hatrany. Novesarana rafitra poakaty tsy misy fahefana, tsy misy vola. Ny tetikasa tiana atao: Ialana ny rafitra fanjanahantany ka dia ho tsinjaraina Faritra 3, Avaratra, Afovoany, Atsimo i Madagasikara. Tsy misy ny misaratsaraka, samy mahazo ranomasina andrefana, atsinanana. Atao eo anivon'ny Fokontany ny fampandrosoana rehetra, ka dia omena azy ny andraikitra rehetra sy ny tetibola.
mercredi, 23 septembre 2020 19:48
Famadihan-drazana: Fomba fanao tsy lefin’ny fihibohana
Misy ireo fianakaviana any ambanivohitra no tapa-kevitra fa hiroso amin’ny fanatanterahana famadihan-drazana ato ho ato, na eo aza ny fepetra ara-pahasalamana. “Ny fanjakana izao efa mivonona ny hanao lanonam-be amin’ny 14 oktobra ho avy izao koa nahoana izahay no sakanana tsy hanao famadihana?” hoy izy ireo. Nanafatrafatra ny Praiminisitra Ntsay Christian ny alahady hariva teo fa tsy mbola azo atao aloha ny lanonana ara-drazana toy ny famadihana. Nahazo toromarika mikasika izany ireo tompon'andraikitra isan-tsokajiny, toy ny Ben’ny tanàna sy ny solontenam-panjakana ary ny mpitandro filaminana.